Duqa Muqdisho oo Xadgudub Ku Micneeyay Bandowga Caasimada Saaran Habeenkii – Al-Hurriyah
Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir, ahna Duqa Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed (Filish) ayaa maanta hortagay boqolaal dadweyne ah oo ka careysan laba qof oo uu xalay askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya dil uu ugu geystay agagaarka isgoyska Jubba ee degmada Boondheere.
Filish oo tegay taalada Daljirka Daahsoon oo ay isu soo baxeen dibadbaxayaasha ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad dheer, isaga oo ka dalbaday inay is dajiyaan.
Sidoo kale wuxuu sheegay in dhibanayaasha ay la qeybsanayaan dhacdada taagan, islamarkaana cadaaladda la hor keeni doono askarigii ka dambeeyey falkaasi.
Duqa magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale ka dalbaday ehellada marxuumiinta iyo dibadbaxayasha inay foodada joojiyaan, islamarkaana ay ka war sugaan dowladda federaalka iyo maxkamadeynta askariga dilka geystay oo haatan gacanta lagu hayo.
Intii ay socotay khudbada Filish ayaa dadku waxa ay ku qeylinayeen erayo ay ku cabirayeen dareenkooda, iyagoo codsaday in si deg-deg cadaalada loo horkeeno askariga toogashadaasi fuliyey oo ka tirsan ciidamada Booliska degmada Boondheere.
Dhinaca kale guddoomiye Filish oo hadalkiisa sii wata ayaa xa-gudub ku tilmaamay bandowga habeenkii ah ee saaran magaalada Muqdisho, kaas oo saameeyey shacabka.
“Arrinta xadgudubka ku ah dadka reer Muqdisho ee bandawga go’aan ayaa ka soo bixi doono idinka ayaa idinku matalaa gobolka Banaadir.“ ayuu yiri Cumar Filish.
Xalay ayey aheyd markii labo qof oo shacab ahaa bandowga dartiis toogasho loogu dilay agagaarka isgoyska Jubba ee magaalada Muqdisho
Taliska Ciidanka qeybta 27-aad ayaa ku baxay shaqaaqo dhawaan sababtay dil oo ka dhacaday degaano ku…
Dagaal xoogan ayaa ka dhacay degaanka hosingow ee gobalka jubbada hoose, kadib markii halkaasi ay isku…
Howl-gal ballaaran oo ay Ciidanka xoogga Dalka Soomaaliyeed ka sameeyeen inta u dhaxaysa Degmooyinka…
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo khudbad ka jeedinayey furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka maamulkaasi ayaa weeraray dowladda federaalka Soomaaliya. Axmed Madoobe ayaa sheegay in madaxda dowladdu ay…